आइपिएल : हैदाराबादको लागि वार्नरको यो अन्तिम सिजन ! » Onlycricnepal
काठमाण्डौ : इण्डियन प्रिमियर लिग( आइपिएल ) को १४ सिजनमा खराब प्रदर्शन गरेको सनराइजर्स हैदराबादका कप्तान डेविड वार्नरलाइ हैदराबादले टिमको कप्तानीबाट हटाउदै केन विलियम्सनलाइ कप्तान बनाएको छ ।
उनलाइ कप्तानबाट मात्र नहटाइ राजस्थान बिरुद्धको म्याचमा हैदराबादले उनलाइ प्लेइङ ११ सम्म स्थान दिएन उनको स्थानमा हैदरावादले मोहम्मद नाबीलाइ खेलाएको थियो।
हैदराबादले उनलाई कप्तानीबाट हटाएसंगै त्यसप्रति दक्षिण अफ्रिकाका फास्ट बलर डेल स्टेनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले हैदराबादले कप्तान वार्नरलाइ गरेको व्यवहारको कारण संभवत दर्शकले वार्नरलाइ हैदराबादको जर्सीमा देख्ने अन्तिम सिजन हुनसक्छ भनेका छन् ।
स्टेनले इएसपीएन संगको अन्तर्वार्तामा भने “ मलाइ थाहाछैन वार्नरले त्यो फैसलाको कुनै जवाफ दिए या दिएनन, जब उनले मनिष पाण्डेलाइ प्लेइङ ११ किन समावेस गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ‘यो मेरो फैसला थिएन भनेको सुनेको थिए सायद त्यहि कुरा टिम प्रबन्धनलाइ मन परेन र उनलाई कप्तान बाट हटाइयो’
उनले अघि भने ‘ टिमको कप्तानसंग स्क्वाएडको जिम्मेवारी लिनु जरुरि पनि छ र साथै मैदानमा को-को जादैछ पनि थाहा हुनुपर्दछ। कहिलेकाही सबैकुरा आफ्नो हातमा नहुन पनि सक्छ। मलाइ लाग्छ यो पुरा निर्णयमा केहि न केहि त भएको छ जसको खबर टिमका प्रबन्धन र वार्नर बाहेक अरुलाई थाहा छैन’ स्टेनले भने।
गोप्य रुपमा केहिन केहित भएको छ : डेल स्टेन
स्टेनले भने, ‘ यस्तो लाग्दैछकि वार्नर र टिम प्रबन्धनको बीचमा केहि न केहि त पक्कै भएको छ, जसको जानकारी अरु कसैलाई छैन। यो अचम्मको कुरा थियोकि उनलाई प्लेइङ ११ मा मौका दिएनन।
अघिल्लो सिजनको लागि अहिलेदेखिनै वार्नरलाइ कप्तान बाट हटाएर केन विलियम्सनलाइ कप्तानको जिम्मेवारी दिएको होला भनेरत बुझ्न सकिन्छ। तर वार्नर आइपिएलका उत्कृष्ट खेलाडी मध्यका एक हुन् सायद उनलाई दर्शकले हैदराबादको जर्शीमा देख्ने यो नै अन्तिम सिजन हुनसक्छ,स्टेनले भने ।
आइपिएलमा इतिहासमा वार्नर सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको पाचौ स्थानमा छन्। उनले २०१४ देखि २०२० को दौरान ५ हजार भन्दा धेरै रन बनाएका छन् । वार्नरको कप्तानीमा हैदराबादले सन् २०१६ मा पहिलो पटक आइपिएलको ट्रफी जितेको थियो।
जुन सिजन बिराटकोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेंजर्स बैगंलोरलाइ हैदराबादले फाईनलमा हराउदै उपाधि जित्न सफल भएको थियो। वार्नरलाइ प्लेइङ ११ बाट हटाएको चर्चा विश्वक्रिकेटमा भइरहेको छ। हैदराबाद यस सिजन अंकतालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको छ।
मुम्बई र केकेआरको म्याच आज, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०८:१२
आईपीएल : ब्याटिङमा भारतीय र बलिङमा विदेशी खेलाडी हाबी, कसले कति क्याच समाते?
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार १६:१५
आइपीएल २०२० : फाइनल खेल्नुअघि सचिन तेन्दुलकरले मुम्बईलाइ दिए खास सन्देश
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १८:१४